को हुन् भद्रगोलकी मुन्नी ? छन यती हट (फोटो फिचर) – ईमेची डटकम
को हुन् भद्रगोलकी मुन्नी ? छन यती हट (फोटो फिचर)
काठमाडौं । चर्चित नेपाली हाँस्य श्रृंखला भद्रगोलका पछिल्लो एपिसोडमा नयाँ कलाकारको इन्ट्री भएको छ ।एनटिभीबाट प्रशारण हुने भद्रगोलमा मधेसी लवजमा बोल्ने मुन्नी नामको क्यारेक्टरको इन्ट्री भएको हो ।
को हुन् त मुन्नी ?
मुन्नी थिएटरकी कलाकार हुन् । उनले थुप्रै नाटकमा अभिनय गरेकी छिन् । उनको वास्तविक नाम प्रियाना आचार्य हो । भद्रगोलमा उनको सुन्दरता र अभिनयलाई निकै दर्शकले रुचाएका छन् ।युट्युवमा अपलोड गरिएको भद्रगोलको पछिल्लो श्रृंखलामा अधिकांश दर्शकले मुन्नीमाथि नै केन्द्रित भएर कमेन्ट गरेका छन् । अधिकांश दर्शकले उनको मज्जाले तारिफ गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् प्रियानाका केही तस्विरहरुः
किन घुम्यो ‘भद्रगोल’ टिमको ‘फनफनी’ ?
टेलिभिजनमा हिट मानिएको हाँस्य सिरियल ‘भद्रगोल’को टिमले चलचित्र निर्माण गर्ने चर्चा चलेको लामै समय भैसकेको छ । तर, चलचित्रको नाम जस्तै यसको निर्माण टिम पनि विभिन्न अवरोधमा फनफनी घुमिरहेको छ ।
यो चलचित्रलाई सुरुवातमा निर्देशक निश्चल बस्नेतले निर्देशन गर्ने पक्का भएको थियो । तर, निश्चलले अन्तिम समयमा आएर चलचित्र छाडे । उनले समय नभ्याएको भन्दै चलचित्र छाडेका थिए । चलचित्रका लेखक समेत रहेका दिपक आचार्य भन्छन्–‘निश्चलजीले करिब १ बर्ष अड्काइदिनुभयो । कहिले साउनदेखि सुरु गर्ने त कहिले भदौदेखि सुरु गर्ने भनेर उहाँले गर्नुभएन ।’
‘भद्रगोल’को श्रृङ्खला निर्देशक दिपक आचार्यले अगाडि भने–‘यसपछि हाम्रो चलचित्रको प्लटहरु रातो टिका निधारमासँग मिल्यो भन्ने भयो । हामी, फेरि कथा परिवर्तन गर्न तर्फ लाग्यौ ।’ चलचित्रका लागि अहिले निर्देशक प्रदिप भट्टराइसँग कुरा भैरहेको छ । प्रदिपले पनि कुरा भैरहेको स्विकार गरेका छन् । प्रदिपसँग केही कुराहरु मिलेको खण्डमा उनले यो चलचित्र निर्देशन गर्नेछन् ।
चलचित्रका लागि सुरुवातमै नायक विपिन कार्कीलाई फाइनल गरिएको थियो । महंगो रकम लिएर विपिनले चलचित्र साइन गरेका थिए । दिपकका अनुसार, विपिनले चलचित्र छाडेका छैनन् । विचमा विपिनको नयाँ चलचित्रको छायांकन र ‘फनफनी’को छायांकन एउटै सेड्यूलमा हुने भएकाले विपिनले नगर्ने चर्चा चलेको थियो । तर, नायक कार्कीले पनि चलचित्र नछाडेको बताए । उनी यो चलचित्र गर्ने मनस्थितीमा छन् । अझ, निर्देशकमा प्रदिप भट्टराई भएको खण्डमा उनका लागि खुशीको कुरा हुनेछ ।
दिपकका अनुसार, चलचित्रको छायांकन भदौबाट सुरु गर्ने योजना छ । यसका लागि अहिले तिव्र तयारी भैरहेको उनले सुनाए । चलचित्रका लागि नायक विपिन कार्की र ‘भद्रगोल’का कलाकार अर्जुन घिमिरे मात्र फाइनल भएका छन् । अन्य कलाकार कोही पनि फाइनल नभएको उनले सुनाए ।
चलचित्रलाई चैत्र २८ गते रिलिज गर्ने तयारी गरिहेको पनि चर्चा चलिरहेको थियो । दिपकका अनुसार, अहिले कुनै पनि मिति फाइनल गरिएको छैन । कमेडी र सामाजिक कथामा बन्न लागेको यो चलचित्रका लागि ३–४ जना नायिकासँग कुरा भैरहेको छ । एक जना नायिका चाडै फाइनल हुने आचार्यले सुनाए ।